Jabuuti: Ninka iyo haweeneyda is qarxiyey waxey ka yimadeen Hargeysa iyo Diridhabe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Jabuuti: Ninka iyo haweeneyda is qarxiyey waxey ka yimadeen Hargeysa iyo Diridhabe
Jabuuti – Mareeg.com: Ciidamada amaanka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa soo saaray magacayda labadii ruux ee bishii 24-kii May isku qarxiyey baar ku yaallada caasimadda dalkaas oo ay ku caweyaan jaaniba u badan reer galbeed.
Xeer Ilaaliyaha guud ee dalka Djibouti Maki Cumar Cabdul-qaadir iyo madaxa dambi-barista ee booliska Djibouti Col Cumar Xasan oo warbaahinta shalay galab kula hadlay hotelka Sheraton ee caasimadda Jabuuti ayaa sheegay in lasoo gebabgebeeyey baaritaankii lagu hayey qaraxii baarka La Chaumiere, islamarakaan helaan macluumaad buuxa oo la xiriira labada qof ee isku qarxiyey baarkaas.
Xeer Ilaaliye Maki Cumar Cabdul-qaadir ayaa sheegay in Muuse Rooble Hiraabe oo kazoo jeeda magaalada Diridhabe ee dalka Itoobiya iyo Hodon Maxamed Ciise oo kazoo jeedda magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland ay ahaayeen labadii ruux ee isku qarxiyey baarkii La Chaumiere.
Labadan mas’uul ayaa sheegay in labada qof ee qaraxa fuliyey ay 22-kii May kazoo galeen xadka Lowya-caddo, iyagoo ka yimid magaalada Hargeysa, islamarkaana ay qaraxa fuliyeen 24-kii May.
Xeer ilaaliyaha ayaa tilmaamay in soo galitaankooda uu u fududeeyay askari ka tirsan booliska Djibouti oo lagu magacaabo Sulaymaan Axmed Waaberi, kaasi oo iminka xabsiga ku jira.
Wuxuu sidoo kale Xeer Ilaaliyaha Djibouti sheegay in ninka iyo haweeneyda is qarxiyey labadii maalmood ee ay joogeen Djibouti ay ku sugnaayeen 3 guri oo ku yaalla xaafadda Balbala ee caasimadda dalkaas.
Maki Cumar ayaa sidoo kale in shalay oo sabti aheyd ay maxkamadda u gudbiyeen 7 ruux, kuwaasoo ahaa dadkii labadan is qarxiyey u fududeeyey iney joogaan guyahooda.
Labada qof ee is qarxiyey oo Alshabaab sheegteen iney iyaga ka tirsanaayeen ayaa la sheegay in waxyar ka hor inta aysan is qarxin lagu arkay iyagoo ka casheynaya baar aad ugu dhow baarkii ay isku qarxiyeen ee La Chaumiere.
Madaxa dambi-barista ee Booliska Djibouti, Col Cumar Xasan ayaa dhankiisa warbaaahinta u sheegay in qaraxyada ay geysteen labadaas ruux aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin dadka Soomaalida ah ee ku nool dalkiisa.
Xeer Ilaaliyaha guud ee dalka Djibouti Maki Cumar Cabdul-qaadir iyo madaxa dambi-barista ee booliska Djibouti Col Cumar Xasan ayaa guul weyn ku tilmaamay in la helay macluumaadka la xiriira labadii qof ee isku qarxiyey baarka, iyadoo taasi alabaabka u fureyso iney la maxkamadeeyo dadkii saaciday.
Qaraxyada 24-kii bishii hore ee May 2014 ka dhacay caasimadda Jabuuti ayaa waxaa ku dhintay ninka iyo naagta is qarxiyey iyo muwaadin u dhashay Turkiga oo baarka ka shaqeynayey, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 15 kale oo u badnaa reer Galbeed.
Parliament Sessions Resume After Alshabaab’s Attack